महिला लघुवित्तको आइपीओ भोली कति बजे हुँदैछ बाँडफाँट ? तपाईको भागमा कति ? – NepalNewsTv | The Daily Star of Nepal
२०७७, १३ फाल्गुन बिहीबार २०७७, १३ फाल्गुन बिहीबार
फागुण १३, काठमाडौ । महिला लघुवित्तको आइपीओ शुक्रबार भोली बाँडफाँट हुँदैछ । बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङका अनुसार आफ्नै कार्यालय हात्तिसार काठमाडौंमा बिहान ८ बजे आइपीओ बाँडफाँड हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
यो आइपीओमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको ३ लाख ७५ हजार कित्तालाई आधार मान्दा ३७ हजार ५०० जना आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर हात पार्ने देखिएको छ । १५ लाख भन्दा धेरै जना भने आइपीओ पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २०७७, १३ फाल्गुन बिहीबार २०७७, १३ फाल्गुन बिहीबार 216 Viewed